ဂစ်ဟာ အရင်ဝေးလ်စ်နည်းပြတွေ ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းဆိုးကို မချိုးဖြတ်နိုင်ခဲ့ဘူး
မှတ်တမ်းဆိုးကို ချိုးဖြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့ ဝေးလ်စ်နည်းပြ ရိုင်ယန်ဂစ် Ryan Giggs
10 Sep 2018 . 2:56 PM
ဝေးလ်စ်အသင်းနည်းပြ ရိုင်ယန်ဂစ် Ryan Giggs ဟာ အရင်နည်းပြတွေ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အဝေးကွင်း မှတ်တမ်းဆိုးကို မချိုးဖြတ်နိုင်ခဲ့ဘဲ စိတ်ပျက်စရာ ရလဒ်နဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က Nations League ပွဲစဉ်အဖြစ် ဒိန်းမတ်အသင်းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ အဝေးကွင်းပွဲမှာ ဝေးလ်စ်အသင်းဟာ (၂-၀)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။ ရိုင်ယန်ဂစ်ဟာ Nations League အဖွင့်ပွဲမှာ အိုင်ယာလန်အသင်းကို (၄-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပေမယ့်လည်း ဒုတိယပွဲမှာတော့ အရှုံးနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ (၁၉)နှစ်အတွင်း ဝေးလ်စ်အသင်းနည်းပြတွေဟာ အဓိကနိုင်ငံတကာ ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ ပထမဆုံးအဝေးကွင်းပွဲမှာ ရှုံးပွဲနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး အခုဆိုရင် ရိုင်ယန်ဂစ်က (၅)ဦးမြောက် နည်းပြဖြစ်လာပါပြီ။ ဝေးလ်စ်နည်းပြတွေထဲမှာ ပထမဆုံးအဝေးကွင်းနိုင်ပွဲ ရခဲ့သူက ဝေးလ်စ်ဂန္ထ၀င် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မာ့ခ်ဟုခ်ျ Mark Hughes ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတုန်းက ဘီလာရုစ်အသင်းကို အနိုင်ရခဲ့တာပါ။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ဝေးလ်စ်နည်းပြတွေဖြစ်တဲ့ ဂျွန်တိုရှက် John Toshack ၊ ဘရိုင်ယန်ဖလင်း Brian Flynn ၊ ခရစ္စကိုးမန်း Chris Coleman ၊ အခု ရိုင်ယန်ဂစ်တို့ အားလုံး အဝေးကွင်းနိုင်ပွဲ ပျောက်ခဲ့ကြတယ်။
အခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလက ဝေးလ်စ်အသင်းနည်းပြအဖြစ် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရတဲ့ ရိုင်ယန်ဂစ်ဟာ အခုလက်ရှိအချိန်အထိ (၅)ပွဲကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီး (၂)ပွဲနိုင်၊ (၁)ပွဲ သရေ၊ (၂)ပွဲ ရှုံးနိမ့်ထားတယ်။ ဒိန်းမတ်နဲ့ ပွဲအပြီးမှာ ရိုင်ယန်ဂစ်က “ဒီပွဲဟာ ကျွန်တော့်အတွက် (၅)ပွဲမြောက်ဖြစ်ပြီး အသင်းရဲ့ အနေအထား တိုးတက်လာတာကို တွေ့ရလို့ ကျေနပ်မိပါတယ်။ အခုရှုံးပွဲကနေ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေ လိုအပ်နေလဲဆိုတာ သင်ခန်းစာယူသွားမှာပါ”လို့ ပြောကြားခဲ့တယ်။
မှတျတမျးဆိုးကို ခြိုးဖွတျနိုငျခဲ့ခွငျးမရှိတဲ့ ဝေးလျဈနညျးပွ ရိုငျယနျဂဈ Ryan Giggs
ဝေးလျဈအသငျးနညျးပွ ရိုငျယနျဂဈ Ryan Giggs ဟာ အရငျနညျးပွတှေ ကွုံခဲ့ရတဲ့ အဝေးကှငျး မှတျတမျးဆိုးကို မခြိုးဖွတျနိုငျခဲ့ဘဲ စိတျပကျြစရာ ရလဒျနဲ့ ကွုံတှခေဲ့ရတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ တနင်ျဂနှနေကေ့ Nations League ပှဲစဉျအဖွဈ ဒိနျးမတျအသငျးနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ အဝေးကှငျးပှဲမှာ ဝေးလျဈအသငျးဟာ (၂-ဝ)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တယျ။ ရိုငျယနျဂဈဟာ Nations League အဖှငျ့ပှဲမှာ အိုငျယာလနျအသငျးကို (၄-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့ပမေယျ့လညျး ဒုတိယပှဲမှာတော့ အရှုံးနဲ့ ရငျဆိုငျခဲ့ရပွီဖွဈပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ (၁၉)နှဈအတှငျး ဝေးလျဈအသငျးနညျးပွတှဟော အဓိကနိုငျငံတကာ ပွိုငျပှဲတှရေဲ့ ပထမဆုံးအဝေးကှငျးပှဲမှာ ရှုံးပှဲနဲ့ ရငျဆိုငျခဲ့ရပွီး အခုဆိုရငျ ရိုငျယနျဂဈက (၅)ဦးမွောကျ နညျးပွဖွဈလာပါပွီ။ ဝေးလျဈနညျးပွတှထေဲမှာ ပထမဆုံးအဝေးကှငျးနိုငျပှဲ ရခဲ့သူက ဝေးလျဈဂန်ထဝငျ တဈဦးဖွဈတဲ့ မာ့ချဟုချြ Mark Hughes ဖွဈပွီး ၁၉၉၉ ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလတုနျးက ဘီလာရုဈအသငျးကို အနိုငျရခဲ့တာပါ။ အဲဒီနောကျပိုငျး ဝေးလျဈနညျးပွတှဖွေဈတဲ့ ဂြှနျတိုရှကျ John Toshack ၊ ဘရိုငျယနျဖလငျး Brian Flynn ၊ ခရစ်စကိုးမနျး Chris Coleman ၊ အခု ရိုငျယနျဂဈတို့ အားလုံး အဝေးကှငျးနိုငျပှဲ ပြောကျခဲ့ကွတယျ။
အခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလက ဝေးလျဈအသငျးနညျးပွအဖွဈ ခနျ့အပျခံခဲ့ရတဲ့ ရိုငျယနျဂဈဟာ အခုလကျရှိအခြိနျအထိ (၅)ပှဲကိုငျတှယျခဲ့ပွီး (၂)ပှဲနိုငျ၊ (၁)ပှဲ သရေ၊ (၂)ပှဲ ရှုံးနိမျ့ထားတယျ။ ဒိနျးမတျနဲ့ ပှဲအပွီးမှာ ရိုငျယနျဂဈက “ဒီပှဲဟာ ကြှနျတေျာ့အတှကျ (၅)ပှဲမွောကျဖွဈပွီး အသငျးရဲ့ အနအေထား တိုးတကျလာတာကို တှရေ့လို့ ကနြေပျမိပါတယျ။ အခုရှုံးပှဲကနေ ကြှနျတျောတို့ ဘာတှေ လိုအပျနလေဲဆိုတာ သငျခနျးစာယူသှားမှာပါ”လို့ ပွောကွားခဲ့တယျ။
အရင်လိုပြန်ဖြစ်ဖို့ ကာလအတန်ကြာ အချိန်ယူရတော့မယ့် မန်ယူ
by Ko Kyue . 44 mins ago